महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र विभागीय प्रमुखहरुबीच कार्य सम्पादन करार सम्झौता « हातमा खबर
महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र विभागीय प्रमुखहरुबीच कार्य सम्पादन करार सम्झौता
प्रकाशित मिति : २०७७, २९ भाद्र सोमबार २३:०३
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकनारायण अर्यालले विभाग, महाशाखा र शाखा प्रमुखहरुसँग कार्य सम्पादन करार सम्झौता गरेका छन् । गएको असार महिनामा सम्पन्न, महानगरको सातौं नगर सभाबाट स्वीकृत वार्षिक नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न मुख्य जिम्मेवारी, सहायक जिम्मेवारी, समयावधि, अनुगमन सूचकसहितका बुँदामा करार गरिएको हो ।
सम्झौतापछि बोल्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले सबै जिम्मेवार भएर लक्ष्य हासिल गर्ने काम गरौं भन्नका लागि यसप्रकारको सम्झौता गरिएको बताए । स्थानीय तहका लागि यो नयाँ अभ्यास भएपनि आफूले आफ्नो जिम्मेवारी अरुलाई दिएर दायित्वबाट पन्छिन नखोजेको बताए । आज करार गर्नेहरुमा प्रशासन, वित्त र राजस्व, सहकारी विभागका प्रमुखहरु क्रमशः नमराज ढकाल, बुद्धरत्न मानन्धर, नुरनिधि न्यौपाने र देवेन्द्र पोखरेल छन् । यसैगरी कानुन महाशाखाका प्रमुख बसन्त आचार्य, नगर प्रहरी महाशाखा प्रमुख धनपति सापकोटा र आन्तरिक लेखा परीक्षण शाखाका प्रमुख गोपाल पोखरेलसँग पनि करार सम्पन्न भएको छ ।
महानगरका निर्देशक दीपक अधिकारीकाअनुसार सबै विभाग, महाशाखा र शाखासँग क्रमशः करार हुनेछ ।
सभाबाट स्वीकृत भएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि नगर प्रमुखले ७ दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले १५ दिनभित्र विभागीय प्रमुखहरुलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसरी प्रत्यायोजित अधिकारलाई जनताको हित हुने काममा प्रयोग गर्ने गरी कार्य सम्पादन करार गरिएको हो ।
जुम्लामा अनसनरत डा. केसीसँग तत्काल वार्ता गर्न सरकारलाई कांग्रेसको आग्रह
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले जुम्लामा अनसनरत डा. गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्न सरकारलाई आग्रह
मलाई प्राधिकरणमा निरन्तरता दिन माग गर्दै प्रदर्शन नगरिदिनुहोलाः कुलमान घिसिङ
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्नो पक्षमा प्रदर्शन
काठमाडौं । संघीय मालिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको